Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, teknolojiyadda LED -ka ayaa ku koray heer la yaab leh. Iftiinka LED-ka ee maanta waa mid aad u tayo badan oo dabiici ah sidii hore, qiimayaasha nalalka ayaa hoos u dhacaya rubuc kasta. Nalalka xariijinta LED waa hab la isku halleyn karo, oo kharash badan leh si loogu daro iftiin dheeraad ah meel kasta oo aad u baahato, gudaha ama dibadda. Bilow sahaminta faa'iidooyinka maanta.
Nalalka LED -ka waxaa loogu talagalay inay sii jiraan sanado ka dheer nalalka caadiga ah ee caadiga ah. Waxay dhif u baahan yihiin beddel. Isticmaalka nalalka laydhka ee meelaha adag ee la gaadhi karo-sida hoosta ama agagaarka jaranjarada, armaajooyinka gudaha, ama hareeraha tareenka-waxay u oggolaanaysaa iftiin joogto ah oo aan ka welwelsanayn .
In kasta oo LED-yada ay aad uga qaalisan yihiin kuwa la barbardhigi karo, nalalka dhaadheer, ama nalalka halogenka ah, qiimaha bilowga bilowga ah waxaa iska leh cimriga dheer ee nalalka iyo isticmaalka tamarta yar. Sababtoo ah nalalka xarriiqda LED -ka ayaa isticmaala koronto aad u yar, beddelidda nalalkaaga hadda jira ayaa ku tusi kara in si degdeg ah loo yareeyo biilkaaga billaha ah. Waxaa sii dheer, is -beddelka beddelka ayaa hoos u dhigaya qiimaha guud iyo qiimaha guud ee LED -yada sare. Dayactir yar oo soo noqnoqda, baahiyaha korontada oo hoos u dhaca, iyo nolol shaqo oo dhaadheer ayaa dhammaantood gacan ka geysanaya samaynta nalalka LED-ka mid ka mid ah hababka nalalka ugu kharashka badan ee adduunku arkay.
Dhaqanka maanta, welwelka deegaanku wuxuu ka muhiimsan yahay dad badan intii ay hore u ahaan jireen. Dad badan ayaa maanka ku haya qashinka macmiilkooda, isticmaalkooda korontada, iyo waxyeelada kiimikooyinka iyo walxaha kale ee sunta ah ee lagu daadiyo qashin -qubka, webiyada, iyo harooyinka. Nalalka xariijinta LED -ga ayaa si gaar ah bay'ada u fiican. Baahida korontada oo hooseysa ee iftiiminta ayaa ka caawineysa inay hoos u dhigto kharashaadka korontada isla markaana yareyso isticmaalka guud ee guriga. Noloshooda dhaadheer ayaa u oggolaanaysa beddel aad u naadir ah, iyada oo waxyaabo badan laga fogeeyo qashin -qubka. Oo si ka duwan nalalka dhaadheer ee dhaadheer, kuwaas oo halis u noqon kara in si aan habboonayn loo tuuro, marka nalalka LED -ku fashilmaan, nadiifintu waa ammaan oo uma baahna qabasho gaar ah.
Nalalka xargaha LED -ka waxaa loo isticmaali karaa gudaha ama dibedda. Waxaa lagu heli karaa qaybo adag ama dabacsan, oo loogu talagalay in si fudud loogu meeleeyo meel kasta. Way fududahay in la rakibo waxayna u baahan tahay in yar oo dayactir la'aan waqti ka dib. Waxaa lagu heli karaa cabbir kasta, dherer, ama qaab kasta oo aad qiyaasi karto si aad ugu haboonaato baahiyahaaga iftiin. Dabacsanaanteeda, oo ay weheliso isku hallaynteeda waarta iyo qiimaha jaban ee waqtiga, waxay ka dhigtaa xulasho aad u fiican qof kasta oo kor u qaada iftiimintooda ama isku daya inuu u dhaqaaqo hab nololeed cagaaran.
Waa maxay sababta caanka ah ee ...
Horumarka degdega ah ee dhaqaalaha ganacsigu, waxa sare u kacaya shuruudaha dadku uga baahan yihiin deegaanka wax iibsiga, taas oo macnaheedu yahay in qurxinta bakhaarka iyo naqshadaynta baayacmushtarka ay noqdeen...
Habka, habka iyo codsiga la taaban karo...
Iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta joogtada ah ee ilaha cusub ee iftiinka macmalka ah, agab cusub iyo laambado cusub iyo faynuusyo cusub, farsamooyinka farsamaynta farshaxanimada ee isticmaalaya ilaha iftiinka macmalka ah ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa, ina siinaya ...
Sidee lagu gartaa nalalka LED-ka?
Marka la barbardhigo nalalka kale, iftiinka panel LED wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u fiican: aadka u khafiifsan, ultra-light, ultra- energy-badbaadinta, nolol ultra-dheer, ultra-badbaadin iyo walwal la'aan! Haddaba, sida loo aqoonsado nalalka LED-ka? 1. Fiiri t...
Talooyin Iftiin toosan oo LED ah
Iftiinka toosan ee LED waxaa sidoo kale loo yaqaannaa iftiinka darbiga toosan. Waxay isticmaashaa looxyada adag ee PCB si ay isugu keento looxyada wareegga. Kuulku wuxuu noqon karaa SMD ama COB. Qaybaha kala duwan ayaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo xaaladda gaarka ah...
Falanqaynta miisaanka suuqa iyo horumarka...
Tirakoobku wuxuu muujinayaa in iyadoo la hirgelinayo ilaalinta tamarta caalamiga ah iyo fikradaha ilaalinta deegaanka iyo taageerada siyaasadaha warshadaha ee dalal kala duwan, suuqa iftiinka LED-ka ee caalamiga ah ayaa sii waday ...
Isagoo ka hadlaya iftiin caafimaad qaba iyo cagaar ...
Macnaha dhammaystiran ee iftiinka cagaaran waxaa ku jira afar tilmaame oo waxtar sare leh & badbaadinta tamarta, ilaalinta deegaanka, badbaadada iyo raaxada, kuwaas oo aan laga maarmi karin. Waxtarka sare iyo tamarta-badbaadinta macnaheedu waa...
Saqafkii hoggaamiyo Panel Light , 900w hoggaamiyo Flood Light, Philips 3030 hoggaamiyo Flood Light, Hoggaamiyo Solar dabayn Flood Light, Hogaaminayo nlalaka 30w, hoggaamiyo Tri-Caddaynta Light Rikoorka ,